Mankalazà Krismasy amin'ireto plugins WordPress 5 ireto | Famoronana an-tserasera
Isaky ny misy isika akaiky Amin'ny fotoanan'ny Krismasy, voaravaka jiro ny arabe izay manasa antsika hivoaka ary amin'ny fahitalavitra manomboka manapoaka dokambarotra manitra anay izy ireo. Ary azo inoana fa maro aminareo no maniry ny hihiratra avy amin'ny WordPress mandra-pahatongan'ny vanim-potoana amin'ny taona, ary izany no antony itondranay plugins 5 anao.
Amin'ireo dimy, angamba horaisiko ny farany: ahoana ny aminao?
Plugins 5 ho an'ny Krismasy
Merry krismasy daholo
Ity plugin ity dia hahatonga anao handray mpitsidika amin'ny pejy manokana amin'ny tranokalanao (ny iray lehibe na ilay safidinao) miaraka a sarimiaina krismasy izany dia hanodinkodina ny atiny. Ity plugin ity dia ahafahanao misafidy ny URL an'ny pejy tadiavinao hitrangan'izany, raha tianao hanana feo na tsia (ary inona ny feo, ampidiro ny URL azy) ary na dia ny safidy misafidy tarehimarika roa an'i Santa Claus aza. : ny iray mitondra kitapo eo an-damosiny, ary ny iray kosa toa mankafy ny lanezy. Eny, satria miaraka amin'ity Dadabe Noely ity, izay hihetsika manerana ny efijery avy eo ankavanana kavia, dia hilatsaka ny lanezy misy lanezy miloko.
Ity plugin ity dia ahafahanao mandefa a laharan-jiro Miloko Krismasy eo an-tampon'ny pejinao.
Amin'ity plugin ity dia hataonao lavo izy ireo felam-panala fotsy (toy ny asterisk) manerana ny pejinao.
Plugin iray hafa mba hianjera amin'ireo felam-panala eo amin'ny pejinao: fa mamela anao hanapa-kevitra fatra maro. Ny loko amin'ireo felam-panala, ny oram-panala betsaka indrindra tadiavinao hilatsaka, ny hafainganam-pandehanan'ny fianjerany, fa ny fihetsiketsehana dia voataonan'ilay kora ...
Ity plugin ity dia mampiseho a mipoitra kely mahasosotra, izay azo nakatona, ahafahantsika miarahaba ireo mpitsidika antsika.
Azonao atao ny misafidy eo anelanelan'ny sary 5 (Santa Claus, snowman, hazo krismasy, antoko mpihira na labozia), manoratra ny lahatsoratra hiarahaba ny Noely sy hisafidy ny datin'ny fanisana. Azonao atao ihany koa ny manapa-kevitra ny loko (na ny ambadika na ny lahatsoratra), ny toerana ary raha tianao hilatsaka aminy ny lanezy. Plugin feno tsara tarehy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » Famolavolana tranonkala » Wordpress » Plugins WordPress 5 hankalazana ny Krismasy